China High-grade Lancome uchungechunge lwesikhumba ukupakisha ingilazi amabhodlela amadoda ifektri kanye nabaphakeli | Jiamei
Uchungechunge oluphakeme lweLancome lwamabhodlela engilazi okupakisha izikhumba zamadoda
Ubuciko: Ukuphrinta kwesikrini, ukunyathela okushisayo, isithwathwa, ilebula, umbala wokuphrinta nabanye
Amabhodlela ekhilimu: 30g, 50g
Amanzi okwakha namabhodlela okugcoba: 40ml, 80ml, 100ml, 120ml
Ukusetshenziswa: Ukhilimu, amanzi okuzenzela kanye ne-lotion
Uchungechunge lweLancome lwamabhodlela eglasi aphethe izikhumba zamadoda
Iqoqo le-Lancome Cosmetics for Men lingenye yezingubo ezimbalwa zezimonyo ezitholakalayo zamadoda.Yenziwe ngengilazi esezingeni eliphakeme, ehlukanisa izimonyo emhlabeni wangaphandle futhi ivimbele ukuhwamuka nokungcoliswa ketshezi. Ingilazi yayo engezansi yakhelwe ukuba ibe mkhulu Sicela uqiniseke, imikhiqizo yenkampani yethu ihambisana nezindinganiso zikazwelonke, hhayi nje kuphela ukuthi inamandla amakhulu, okubalulekile futhi kuvikela imvelo.Amanzi okwakhiwa nebhodlela le-lotion lihambisana nepompo nekhava, futhi ibhodlela likakhilimu ngegasket edonswe ngesandla nekhava.
Ukucaciswa kwamabhodlela obisi angama-40ml, 80ml, 100ml no-120ml.Cream amabhodlela atholakala ngo-30g no-50g osayizi.Inkampani yethu inokuphrinta kwesikrini, ukunyathela okushisayo, ukubanda, ilebula, umbala wokuphrinta nezinye izinqubo, sizokopisha kahle izithombe hlinzeka, ukuqinisekisa ukwaneliseka kwakho.
1. Intengo: Intengo esekhasini ayinamabhodlela + isivalo, ngaphandle kwenqubo. Sicela uxhumane nesevisi yamakhasimende ngesilinganiso esithile
2. Isampula: Isampula ngokuvamile alinombala webhola lomzimba webhodlela elinekepisi.
Uma udinga, singakunikeza isampula kuwe ukuze uqinisekise isitayela sokugcina.Ngoba sinokuphrinta kwesikrini, ukunyathela okushisayo, isithwathwa, ilebula, umbala wokuphrinta nezinye izinqubo, ukuze sikwazi ukwenza ngezifiso amagama namaphethini ahlukile kuwe. thinta insizakalo yamakhasimende ukuthola imininingwane.Ngemva kwalokho, ukhokha idiphozithi, futhi sizokhiqiza umkhiqizo ngobuningi ngokwesampula.Okugcina, umkhiqizo uthunyelwa kuwe futhi ulethwe ukulinganisela inkokhelo ngemuva kokwamukelwa kwakho.Ngakho isivumelwano sethu sesenziwe.
Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi. Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwane bebhizinisi nawe!
Langaphambilini Ukupakisha kwezimonyo kusetha amabhodlela engilazi angenalutho nezimbiza
Olandelayo: I-Personnal Skincare Skew ingilazi yesifutho seglasi kanye nezimbiza zebhodlela lezimonyo elibekelwe ukuthengiswa